Ukwenza izixhobo kunye nokunyathela imveliso
Senza izixhobo kunye nenkampani yokunyathela imveliso. Inkampani yahlulwe yangamasebe amathandathu aphambili: uyilo, ukuqhubekeka, ukuhlanganisa, ukunyathela, kunye nokuqinisekisa umgangatho. Ukusuka kunxibelelwano nabathengi kwiprojekthi yoku-odola ukuya kugqithiso lwezixhobo, ikhonkco ngalinye lokuthunyelwa kwemveliso linxibelelene ngokusondeleyo ....Funda ngokugqithisileyo »
Silungiselela kwaye sithumela izinto ezingasetyenziswanga kwizixhobo ezenziwe nguMAGNA. Sivavanye indawo yomngxunya ngamnye wobugcisa.Funda ngokugqithisileyo »
Thumela eMexico. Izinto zemveliso yesi sixhobo yi-aluminium enobunzima be-1.0mm. Ubume bemveliso bunzima, kwaye iimfuno zobungakanani bokunyamezelana zingaphezulu. Ngenxa yomngxunya omkhulu embindini wemveliso, ububanzi bekhonkco langaphambili lemveliso lincinci, imveliso ibuyile ...Funda ngokugqithisileyo »
Isixhobo semoto esiqhekezayo seenyawo
Senze izixhobo ezininzi zokuqhekeka kweenyawo kwiJamani, Mexico naseSpain. Sishwankathele ubutyebi bamava obuchwephesha kwiziqwengana zesixhobo kunye nolwakhiwo lwezixhobo kunye nokulungisa izixhobo kwesi sixhobo semveliso. Ukusuka kwiseti yokuqala yeesampulu, ixesha ziiveki ezili-12. Inqanyulelwe iiveki ze-8-10 ngoku, kwaye ...Funda ngokugqithisileyo »
Lixesha lokuqala ukwenza isixhobo kumthengi waseJamani, kwaye kuye kwabonwa ngumthengi. Umthengi wanelisekile ngumgangatho wethu kunye nomoya wokusebenzisana. Sisebenzise iiveki ezi-2 ukuyila ukungunda, iiveki ezi-3 zokwenza, i-4 yokuhlangana kunye nokulungisa ingxaki, kunye neveki enye ukuyigqiba. Enkosi ngentembeko yakho ...Funda ngokugqithisileyo »
Senza uhlolo lwedatha yokukhanya eluhlaza okwesibhakabhaka yokwenza, ukubumba, kunye namalungu eemela, kunye nokubonelela abathengi ngeengxelo zokuhlola ze-3D. Umgangatho kunye nokuchaneka kwesixhobo kuphuculwe kakhulu.Funda ngokugqithisileyo »
Uvalela iimveliso zolwimi ezithunyelwa eUnited States ngokuqhubekayo zivelise iziqwenga ezingama-300,000 kubathengi, kwaye ukungunda okwangoku kunye neemveliso zisiwe kubathengi kwimveliso. Sichithe iiveki ezintlanu sisenza izixhobo, iiveki ezi-2 zokulungisa ingxaki, kunye neveki e-1 kwimveliso ...Funda ngokugqithisileyo »
Iimveliso zokubamba impahla yehardware kunye neemveliso zombane zasekhaya
Esi sisixhobo semathiriyeli esineemveliso zokuphatha imithwalo yehardware kunye nezixhobo zasekhaya. Iimveliso zitofelwe eMelika. Ngexesha lokwenziwa kwesikhunta, sisebenzise i-TICN ukutyabeka iziqhoboshi ukwenza izinto zokubumba kunye neepunch ukukhulisa ukunganyangeki ngexesha lokuvelisa. Ikhomishini ...Funda ngokugqithisileyo »
Senza izixhobo kunye nenkampani yokunyathela imveliso. Inkampani yahlulwe yangamasebe amathandathu aphambili: uyilo, ukuqhubekeka, ukuhlanganisa, ukunyathela, kunye nokuqinisekisa umgangatho. Ukusuka kunxibelelwano nabathengi kwi-odolo p ...